Intsingiselo yeMole ibhalwe ngokuBethelweyo: Into emele uBuso noMzimba - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Intsingiselo yeMole ibhalwe ngokuBethelweyo: Into emele uBuso bakho noMzimba wakho
Iinyumasi ebusweni bakho nasemzimbeni zonke zinentsingiselo ethile ngokokuhlala kwazo. Fumanisa ukuba yintoni imole yakho ethetha ngokusekwe kwindawo ekuyo.
Iinyumasi zingaphezulu kunophawu nje kulusu lwakho, enyanisweni zinjengeenkwenkwezi ezibonakala ebusweni nasemizimbeni yethu. Kunye neendawo zobuhle, zenza isilayidi esibalulekileyo sokubonakala komzimba kunye nokwenza iindawo zomlinganiswa wethu kunye nekamva lethu. Tyhila intsingiselo yeemoles kulusu lwakho ngokokuma komzimba wakho.
Imvelaphi yee-moles kunye neendawo zobuhle
Zithini i-moles ebusweni bomfazi
Kuthekani ngobuso bendoda?
Zithini i-moles kumzimba womfazi
Kwaye emzimbeni womntu
Imvelaphi yee-moles kunye neendawo zobuhle: Zinexesha elidlulileyo
Ziye zanemfashini ukusukela ngexesha lamaRoma nelase-Egypt. Ngala maxesha, amaRoma kunye nama-Egypt azobe amanqaku esikhumbeni sabo ukufihle ukungafezeki kwabo. Fumanisa intsingiselo yeentlungu zomzimba kunye nentsingiselo yokuthimla ukuze ufunde ngakumbi ngazo.
I-Marquis kunye ne-Courtesans ipensile kwiindawo ezintle kunye ne-moles ngekhulu le-18 ukuya qinisekisa ubuntu babo.
- Funda eyakho ihoroscope yemihla ngemihla kwaye Inkqubela phambili yonyaka ngolwazi oluthe kratya -
Nxibelelana nePsychic ukuze ufumane ulwazi ngakumbi kwiindawo zakho zobuhle!
Zithini iinyengane ebusweni babasetyhini-Kuxhomekeke kwindawo abakuyo
Indawo nganye ebusweni inxulunyaniswa nophawu oluthile lomntu, ubuntu kunye nokumiselwa.
Ebunzini: Ukuncamathela nzulu kubazali kunye nomlinganiswa oqinileyo
Kujikeleze amehlo: I-Naïve kunye nefuthe (iliso lasekhohlo) kwaye uziva kakhulu kwisini esahlukileyo (iliso lasekunene)
Ngempumlo: Indlela yokuphila engathandekiyo (kwicala lasekhohlo) okanye ngononophelo kwaye uqaphele (kwicala lasekunene)
Ezidleleni: Ngaphezulu (ngasekhohlo) kwaye uthozamile kwaye unobubele (ngasekunene)
Ezindlebeni: Imfihlo kwaye iyodwa (ngasekhohlo) kwaye ayizinzanga (ngasekunene)
Malunga nomlomo: Iswiti kwaye inengqiqo (imilebe ephezulu) kwaye iyonqena kwaye inomdla kakhulu (umlebe osezantsi)
KumaXesha Aphakathi abantu bazitshisa iinyumakazi zabo kuba bezigqala njengendawo uMtyholi angene kuyo kwimizimba yabo, kodwa ngoku, enkosi kuMaryline Monroe, imole leyo iye yangumfuziselo wenkanuko kunye nobukhazikhazi. Kuxhomekeka kwindawo ekuyo, iya kuba neentsingiselo ezininzi.
Iintsumpa ebusweni bendoda zichithwe: Indawo ekuyo ibonisa intsingiselo yazo
Fumanisa ukuba yintoni amanqaku esikhumbeni sakho athetha ngawe kwaye ungubani.
Ebunzini: Usapho lubalulekile kuwe
Kujikeleze amehlo: Ukungaqiniseki (iliso lasekhohlo) kwaye ubuthathaka kwaye uphazamiseka lula (iliso lasekunene)
Ngempumlo: Uthanda ukuchitha imali (kwicala lasekhohlo) kwaye uqaphele (kwicala lasekunene)
Ezidleleni: Ikratshi (kwicala lasekhohlo) kunye nethemba (ngasekunene)
Ezindlebeni: Imfihlo (ngasekhohlo) kunye nethamsanqa (ekunene)
Malunga nomlomo: Ubudlelwane obungazinzanga (umlebe ophezulu) kunye nembonakalo yovuyo (umlomo ophantsi)
Zithetha ntoni emzimbeni womfazi?
Iinyumasi zifumaneka rhoqo emzimbeni kunayo nayiphi na enye indawo kunye nezo zazo Indawo esikhumbeni sakho ityhila amaqashiso ngawe.
Nantsi eyakho Kuthetha ukuba kusekwe kwindawo yabo emzimbeni wakho.
Kwigxalaba: Ubuntu obomeleleyo (ngasekunene) kunye nemfuno yothando (ekhohlo)
Ngasemva: Uthanda umngeni kodwa uswele ukuzimisela
Kwibele: Inkanuko kunye nesini
Engalweni: Bekhulile kwaye eneenkani
Kwisandla: Izakhono zokulukuhla kakhulu
Emlenzeni: Ukungazithembi (ngasekhohlo) kunye nokuphelelwa ngumonde (ngasekunene)
Ngamadolo: Ndifuna ukuqatshelwa (ngasekhohlo) kwaye sithobekile (ekunene)
Kwithanga: Ubuntu bokuzimisela
Kwiimpundu: Uhlobo olulungelelanisiweyo
Ngonyawo: Ukuthanda izinto ezintle ebomini
- Fumanisa oko umzimba wethu uzama ukusixelela xa siluma kwaye ufunde phezulu kwi uphawu lokutsha kunye nokukhala kweendlebe -
Ukuba uziva ulahlekile, yiya kwi-Psychic ukuze ufumane iingcebiso!
Njani emzimbeni womntu?
Nokuba yeyiphi indawo yemole yakho emzimbeni wakho, nantsi Ithetha ntoni kwaye iyintoni kuwe.
Kwigxalaba: Ubuntununtunu babafazi (ngasekunene) kwaye abucwangciswanga (ngasekhohlo)
Ngasemva: Unobuhlobo kakhulu kwaye uyaphuma
Kwipectoral: Ukuzinikela kunye nesisa
Engalweni: Ukuphelelwa ngumonde nokungxamiseka
Emlenzeni: Ukumamela (ngasekhohlo) kunye nokuthandabuza (ngasekunene)
Ngamadolo: Ukungazithembi (ngasekhohlo) kwaye ulungile (ngasekunene)
Kwithanga: Umtsalane kwaye unyanisekile
Kwiimpundu: Ukuphelelwa ngumonde kunye nokunyanzelwa
Kwisinqe: Uthanda ukuba kubudlelwane
Ngonyawo: Igcinwe kwaye ixhomekeke
intsingiselo yenombolo 5
lucky lucky 6 ukubhula
injani imiqondiso yomoya
intsingiselo yokomoya yama-55
Ithetha ukuthini xa ubona u-1212
intsingiselo yokomoya yenani le-10